Nihoatra ny marika mpanjifa iray tapitrisa | iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Shudder dia nihoatra ny marika mpanjifa iray tapitrisa
Vaovao Mahafaly Fialam-bolyShudder (sarimihetsika)
Shudder dia nihoatra ny marika mpanjifa iray tapitrisa
by Waylon Jordan Septambra 22, 2020
nosoratan'i Waylon Jordan Septambra 22, 2020
Ny serivisy fampandehanana horohoro / mampientanentana rehetra an'ny AMC, Shudder, dia nanambara tamin'ity maraina ity fa nihoaran'izy ireo ny marika mpanjifa 1 tapitrisa notadiavina. Ny serivisy dia nanangana tsy tapaka ny maha-mpikambana azy hatramin'ny nanombohany nisokatra ho an'ny besinimaro tamin'ny 2016, saingy nahita fiakarana goavana tamin'ny taona lasa niaraka tamin'ny fanampin'ny takelaka fandaharana voalohany.
"Ny fampidirana andian-tantara sy sarimihetsika tany am-boalohany dia nampiroborobo ny fitomboantsika ary nanova an'i Shudder ho serivisy tsy maintsy ananana ho an'izay liana amin'ny horohoro, fampientanentanana na fialamboly mihoatra ny natiora", hoy i Miguel Penella, filohan'ny AMC Networks SVOD tamin'ny fanambarana voarainay androany maraina. “Ny fifantohanay tsy tapaka amin'ny fandaharana kalitao, atiny vaovao sy fitadiavana ireo mpamorona vao haingana indrindra dia nahafahan'i Shudder mipoitra tao anatin'ny tontolon'ny serivisy fisoratana anarana. Ny fahombiazan'i Shudder dia tonga satria ny serivisy SVOD hafa kendrena — Acorn TV, Sundance Now ary UMC — dia manohy ny firoboroboan'ny mpanjifany amin'ny alalàn'ny mpankafy mafana fo miaraka amin'ny atiny ankafiziny indrindra. ”
Io atiny io dia nahitana andian-dahatsoratra am-boalohany tamin'ny taon-dasa Fampisehoana mampihetsi-po, miorina amin'ny sarimihetsika George A. Romero / Stephen King tany am-boalohany tamin'ny 1982 ary koa amin'ity taona ity Host, horonantsary nosoratana, notifirina ary navoaka tao anatin'ny 12 herinandro monja nandritra ny quarantine izay isaina ho sarimihetsika # 1 amin'ny taona ao amin'ny Rotten Tomates.
Giancarlo Esposito ao amin'ny fizarana premiere an'ny Shudder's Fampisehoana mampihetsi-po
Ho fanampin'ilay fandaharan'asa voalohany sy manokana ataon'izy ireo dia manavao ny takelaka sarimihetsika kilasika sy antokom-pinoana isam-bolana ihany koa izy ireo mba hitazomana ny tolotra omen'izy ireo sy hiverina ny mpamandrika bebe kokoa.
Ny serivisy streaming dia nanamafy ny fanitarana azy ireo amin'ny faritany vaovao miaraka amin'ny fanampiana ny fitomboan'ny famandrihana. Raha vao nisy izy io, dia tany Etazonia, Kanada, ary UK ihany no misy an'i Shudder fa efa niparitaka tany Alemana ary tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nifindra tany Nouvelle Zélande sy Aostralia izy ireo. Afaka mijery amin'ny alàlan'ny tranokalany an-tserasera ireo mpampiasa, saingy misy ihany koa ny serivisy ao amin'ny Roku, Fire TV, Apple TV, ary XBox ary koa ny fananany "fantsona" manokana amin'ny app Apple TV sy amin'ny Amazon Prime any amin'ny faritany sasany.
Mpampiasa Shudder ve ianao? Lazao anay izay tianao momba azy ao amin'ny hevitra!
AMCFampisehoana mampihetsi-poHostmangovitraWaylon Jordan
Tightwad Terror talata - Sarimihetsika maimaim-poana amin'ny 9-22-20
Hulu's 'Run' Starring Sarah Paulson dia nametraka ny daty famoahana ny Novambra